कहिल्यै नभरिने चीज रहेछ ‘प्रेम’ – Saurahaonline.com
कृष्ण धरावासी काठमाडौं : मैले उहिले राधा उपन्यासमा कतै लेखेको थिएँ, एउटा संवाद जुन कृष्ण पात्रले बोलेको थियो–“राधा ! आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा नबिर्सिकन अर्कालाई प्रेम गर्न कहाँ सकिन्छ? प्रेम भन्नु नै आफूले आफैँलाई बिर्सी आफूलाई अरुमा पाउनु हो। मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तिमीमा पाउनु र तिमीले आफूलाई ममा पाउनु प्रेमको पूर्णता हो।
भर्खरै कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मासँगको अन्तर्वार्तामा नेकपाका अध्यक्ष, पूर्वक्रान्तिकारी नेता प्रचण्डले भन्नु भयो– उहाँको हरेक बिहानको प्रारम्भ पुराना नेपाली आधुनिक र लोकगीत सुनेर सुरु हुन्छ। स्पष्ट छ–ती भनेका पक्कै पनि क्रान्तिकारी गीत हुँदैनन्। ती प्रेम संयोगका वा प्रेम वियोगका हुन्छन्। लोकगीत त प्रेमी–प्रेमिकाकै संवाद नै हुन्। त्यसो भए हामीले उहाँको क्रान्तिकारी योद्धा व्यक्तित्वमाथि बनाएको धारणा सही रहेछ त? हामी सोच्थ्यौँ होला–प्रचण्ड त जुनसुकै बेला पनि क्रान्तिकै कुरा गर्छन् होला, तर, त्यो होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। जब उहाँलाई पारिवारिक विषयमा प्रश्न गरियो, किञ्चित भावुक देखिनु भो।
राधा उपन्यास लेख्दै गर्दा प्रेमका भावनात्मक छालहरू यसरी आउँथे, तिनलाई उपन्यासमा राख्नु सम्भव थिएन। अनि तिनलाई बेग्लै पातामा लेख्दै गएँ।